China igwe anaghị agba nchara Hexagonal Bar rụpụta na Factory | Huaxiao
Hexagon mmanya bụ ngalaba nke hexagonal siri ike ogologo mmanya igwe anaghị agba nchara, n'ihi na njirimara nke igwe anaghị agba nchara hegzagon mmanya ọtụtụ-eji na oké osimiri, chemical, ewu na akụkụ ndị ọzọ.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere igwe anaghị agba nchara Hexagonal mmanya
Nha : 3mm-200mm, 1/8 ″ ka 8 ″
Ọkọlọtọ: GB1220, ASTM A 484 / 484M, EN 10060 / DIN 1013 ASTM A276, EN 10278, DIN 671
Ọkwa: 201,304, 316,316L, 310s, 430,409
Imecha: Black, NO.1, igwe nri imecha, ihe osise oyi
General Description ardskpụrụ banyere igwe anaghị agba nchara
Na usoro nke igwe anaghị agba nchara Rolling ụkpụrụ, na US, UK, Germany, France, Russia, Japan na mba ụkpụrụ ndị ọzọ elu, na US ọkọlọtọ size ndidi bụ ihe kacha sie ike. Standardskpụrụ kachasị ọhụrụ maka profaịlụ igwe anaghị agba nchara na-ekpo ọkụ akpọrepu bụ: ASTMA276 "Nkọwapụta ọkọlọtọ maka igwe anaghị agba nchara na Ogwe Ọkpụkpụ Okpomọkụ na profaịlụ"; American ASTM 484 / A484M "Nchọpụta izugbe maka igwe anaghị agba nchara na Ogwe osisi na-eguzogide ọgwụ, Billets na Forgings"; German DIN17440 "Ọnọdụ nka na ụzụ maka nnyefe nke mpempe akwụkwọ anaghị agba nchara, Hot Rolled warara, Waya, waya adọtara, Ogwe igwe, ibe ya na Billet"; Japan JlS64304 "Igwe anaghị agba nchara mkpanaka". Ná mmalite 1980s, China jikọtara ụkpụrụ nke United States, Japan, Germany, nke bụbu Soviet Union na International Organization for Standardization (ISO), ma lekwasị anya na ụkpụrụ JIS anaghị agba nchara nke Japan JIS, ma mepụta ụkpụrụ mba GB1220- 92 maka ogwe igwe anaghị agba nchara, na-ezo aka na mba ọzọ. Ardskpụrụ, ọkọlọtọ mba GB4356-84 maka igwe anaghị agba nchara ejirila rụọ ọrụ, nke na-eme ka usoro nchara ahụ bụrụ nke zuru oke, ma nakweere ụdị eji mba ụwa dịka United States na Japan. Stainlessfọdụ akara igwe anaghị agba nchara na China kwekọrọ na akararị ọkọlọtọ America, dị ka egosiri na Tebụl 1. N'otu oge ahụ, ọ na-ejigide akara mmụta ndị a na-ejikarị na China, nke bụ isi ihe kwekọrọ na akara nchara igwe anaghị agba nchara nke mba ndị mepere emepe dịka United States, ma nwee nnukwu ntụgharị. E jiri ya tụnyere mba ndị mepere emepe, ọdịiche dị n'etiti ụkpụrụ ahụ n'onwe ya belatara nke ukwuu, mana ogo elu na nnabata ogo adịghị mma, ọdịiche dị n'ọkwa anụ ahụ buru ibu.
Igwe anaghị agba nchara mmanya Production Usoro
Usoro mmepụta usoro mmanya: ịnabata billet → kpo oku → Rolling → okpukpu abụọ → jụrụ → akpacha ajị → nnyocha → nkwakọ ngwaahịa → ịgbakọ → nchekwa.
Obere ogwe na-emeputa site na obere igwe. Typesdị obere obere igwe bụ: na-aga n'ihu, ọkara na-aga n'ihu na kwụ. Ka ọ dị ugbu a, imirikiti ihe igwe ihe eji eme ihe ugbu a na obere ihe eji eme ihe. Ihe igwe eji egbu osisi a na - ewu ewu ugbua nwere igwe eji egwu egwu ọsọ ọsọ na akụkụ 4 nwere nnukwu mkpụrụ osisi. Mpempe akwụkwọ eji eme ihe na obere ihe na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu, na akụkụ ya n'ozuzu bụ 130-160 mm, 180 mm × 180 mm, ogologo ya n'ogologo bụ 6-12 mita, na ụgwọ billet bụ 1.5 ~ Tọn 3 A na-ejikarị usoro ntụgharị dị iche iche edozi n'ụzọ dị larịị, na-enweta ntụgharị zuru ezu na-enweghị ntụpọ. Ọnụ ọgụgụ nke racks kpebisiri ike site n'ụkpụrụ ịgbakọ otu rack ọnụ. Igwe igwe na-agagharị na-abụkarị ọtụtụ ọnụ ọgụgụ. Enwere obere igwe iri na asatọ, iri abụọ na abụọ, iri abụọ na abụọ ma ọ bụ iri abụọ na anọ maka nha nha dị iche iche na nhacha agba, ma 18 bụ isi. Speed-mgbanwe, Micro-erughị ala na obimgbalielu-free inyefe bụ iche atụmatụ nke oge a niile na-aga n'ihu obere igwe. Akụkụ nke ike Rolling na-ajụ inyefe etiti na-achịkwa Micro erughị ala. Akụkụ nke ọkara na-agagharị na igwe na-emecha eme ihe bụ enweghị nchekasị iji hụ na ngwaahịa ahụ ziri ezi. Na-aga n'ihu igwe na-enwekarị 6 ruo 10 loopers, na ọbụna ruo 12 loopers.
Mfegharị mmanya bụ ihe kachasị mfe iji mejuputa ihe niile akpọrọ akpọrọ ma nwee ike ịme ya n'ọtụtụ ụzọ. Si atọ ala na-ighikota, si ọkara na-aga n'ihu na-na-aga n'ihu, Ogwe nwere ike na-emepụta, ma ha mkpụrụ, akụkụ ziri ezi, okokụre ngwaahịa, na ngafe ọnụego bụ nnọọ iche. Ihe siri ike nke igwe mpịakọta atọ dị ala, na ngbanwe nke okpomoku kpo oku ga-ebute ụzọ dị oke nha nke ngwaahịa. Tụkwasị na nke ahụ, ngwa ngwa nke usoro ahụ na ogologo oge ntụgharị na-eduga na mmụba na ọdịiche okpomọkụ dị n'etiti isi na ọdụ nke ngwongwo na-agbagharị, nha enweghị nkwekọ, na arụmọrụ adịghị arụ ọrụ. Mmepụta dị nnọọ ala, ogo na-agbanwe nke ukwuu, na ogo dị oke ala. Mills ndị na-agagharị agagharị na-aga n'ihu na-adịkarị na nke ọzọ, akụkụ a na-agagharị agbagọ agbagọghị, ihe ọghọm pere mpe, mmepụta ya dị elu, na mmepụta ọkachamara dị ukwuu na njikwa arụmọrụ nwere ike ime. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ na-agagharị agagharị na-agbasi ike dị elu, akara nchịkwa dị elu, na nkenke nhazi na ọnụego a na-emeziwanye nke ọma, ọkachasị ọnụego mkpụrụ abawanyela, na mkpofu nke nchara nchara na ọkụ ọkụ azụ abụrụla belatara. Ka ọ dị ugbu a, a na-emegharị mgbagharị mmanya site na ọkụ ọkụ ọkụ, mgbali elu mmiri dị elu, ịgbanye mmiri dị ala, ịgbanye isi na usoro ọhụrụ ndị ọzọ. Rough Rolling na ọkara Rolling na-mepụtara iji imeghari ka nnukwu billets ma melite Rolling nkenke. Emecha m igwe igwe tumadi iji melite ziri ezi na ọsọ.
Tụnyere nkịtị carbon ígwè na-ekpo ọkụ Rolling, Rolling technology na usoro nke igwe anaghị agba na-tumadi na-egosipụta na nnyocha na ihicha nke ingots, kpo oku ụzọ, mpịakọta onu imewe, inyefe okpomọkụ akara na na-akara okpomọkụ ọgwụgwọ nke ngwaahịa.
Nke gara aga: Igwe anaghị agba nchara Channel Bar
Osote: 316L316 Cold Rolled Stainless Steel sheets (0.2mm-8mm)